Popayán, kungani yaziwa ngokuthi "idolobha elimhlophe"? | Ukuhamba kwe-Absolut
Popayán, kungani yaziwa ngokuthi "idolobha elimhlophe"?
IPopayán, idolobha elimhlophe, ingenye yezindawo zezivakashi ezithakazelisa kakhulu eColombia. Indawo egcwele ubucwebe bokwakha futhi enikeza izivakashi zayo isipho sezinkanyezi ezinhlanu sokudla. Futhi, kanye neCagagena de Indias, okuyiyona ndawo okuyiyona ezokuvakasha kwamasiko wezwe
Kepha into ehlaba umxhwele ngePopayán, okungenani okumangaza kakhulu isihambi esivakashela okokuqala, yinhle ukwakhiwa kwesitayela samakholoni. Zonke, amasonto nezakhiwo zomphakathi, zabelana ngesici esibalulekile: i Umbala omhlophe olungaphambili lwayo olungaphambili.
Noma kunjalo, umhlophe akuwona umbala wokuqala we inhlokodolobha yomnyango waseCauca. Kubonakala sengathi "imfashini" yokupenda imidwebo emhlophe yaqala ngekhulu lama-XNUMX futhi yaphumelela kangangoba yasabalala kuyo yonke indawo yomlando wedolobha.
Emashumini eminyaka adlule abaklami abaningi bokubuyisela sebenqumile buyisa imibala efana ne-ocher, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokuphuzi, okuthi ngokombono wakhe, kukhombisa ubuso obuyiqiniso bomuzi wokuqala wamakoloni, isisekelo seSpain USebastian de Belalcázar ngonyaka we-1536.
Umbono wokuthi "kubuyiselwe imibala yawo" ePopayán kwaba ngundabuzekwayo, ngoba enye yezindawo eziheha izivakashi kule ndawo iyisiteketiso "idolobha elimhlophe." Nezokuvakasha akumele sizikhohlwe, zingenye zezinsika eziyisisekelo zomnotho wazo.
1 Yini ongayibona ePopayán, idolobha elimhlophe
1.1 UMorro del Tulcán
1.2 ICathhedral Basilica ka-Our Lady of the Assumption
1.3 ICaldas Park
1.4 UPueblito Patojo (uRincón Payanés)
1.5 IHumiladero Bridge
1.6 iwashi lombhoshongo
1.7 IHermitage kaJesús Nazareno
1.8 I-Pantheon of the Próceres
2 Uzovakashela nini iPopayán, idolobha elimhlophe
Yini ongayibona ePopayán, idolobha elimhlophe
IPopayán idolobha elikumema ukuthi uzulazule. Imigwaqo nezikwele zayo zinikeza isivakashi ikhathalogi ehlaba umxhwele yamatshe ayigugu yokwakha namakhona amnandi. Ngaphezu kwalokho, zonke zigxile enkabeni yedolobha futhi zitholakala kalula ngezinyawo. Lezi ngezinye zezinto ongeke uziphuthelwe:
UMorro del Tulcán, umbono omuhle kakhulu edolobheni elimhlophe.
UMorro del Tulcán
Ukusuka kuleli gquma, abanye abalibiza ngokuthi "yiphiramidi" ungajabulela ukubukwa okuhle kakhulu kwePanayán, idolobha elimhlophe. Phezulu kwe- UMorro del Tulcán kukhulunywa ngomfanekiso wamahhashi kaSebastián de Belalcázar.
ICathhedral Basilica ka-Our Lady of the Assumption
Leli cathedral (elisesithombeni elihola okuthunyelwe) lingelesitayela esihlukile sokwakha kusuka kwamanye amathempeli ePopayán. Isizathu ukuthi isakhiwo sokuqala sabhujiswa ngo-1566 ukuze sakhiwe kabusha kamuva isitayela se-neoclassical. Into yayo egqame kakhulu ngu udome lwayo Amamitha ayi-40 ukuphakama.
Itholakala enkabeni yedolobha elinomlando wePopayán. Kukhona isithombe somuntu ohlakaniphileyo UFrancisco Jose de Caldas, enikeza ipaki igama layo. Kuzungezwe yizakhiwo ezahlukahlukene ezinjengeHhovisi leMeya kaMasipala, isigodlo sika-Archbishop noma iClock Tower, kanye neminye iminyuziyamu namasonto amaningi afanele ukuvakashelwa.
Ukufinyelela kuPueblito Patojo (Rincón Payanés).
UPueblito Patojo (uRincón Payanés)
Uma unesikhathi esincane sokwazi iPopayán, idolobha elimhlophe laseColombia, le yindawo okufanele uye kuyo. Kuhlelo UPueblito Patojo (obizwa nangokuthi URincon Payanés) kukhona ukukhiqizwa kabusha kwezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zedolobha, kanye nemakethe yokuzijabulisa lapho unganambitha ukudla okuhle kakhulu kwasendaweni.
Elinye lamakhona adumile wedolobha yi IHumilladero Bridge, eyakhiwa ngo-1873. Isakhiwo saso sinamakhothamo ayishumi nanye anemikhawulo eyindilinga kanye ne-arch yamanga. Inobude obuphelele bamamitha angu-240 nokuphakama kwamamitha ayi-9 ngaphezu kwezinga le- Umfula iCauca.
Esinye isibonakaliso sedolobha esaziwayo. Yakhiwa ekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi itholakala ekhoneni eliseningizimu-ntshonalanga yeParque Caldas.
Indawo engaphambili yeHermitage kaJesús Nazareno, ePopayán.
IHermitage kaJesús Nazareno
Isonto elincane, kodwa elihle futhi elithandwa kakhulu yiPayanese. Leli tshe eliyigugu lokwakhiwa kwamakholoni lisukela ngekhulu leshumi nesikhombisa futhi liqukethe ngaphakathi kwalo ingcebo eyiqiniso ye- ubuciko obungcwele ezivela ezikoleni zaseSpain nase-Italy. IHermitage kaJesús Nazareno yacekelwa phansi ukuzamazama komhlaba kwango-1983, kepha yabuye yabuyiselwa emuva futhi namhlanje ibukeka iyinhle kakhulu.
I-Pantheon of the Próceres
Isakhiwo esihle sakudala esakhiwa ngo-1928 ukuze sibe yisihlalo soMkhandlu woMnyango waseCauca. Kodwa-ke, njengamanje kuyisizwe lapho izinsalela ze- Amaqhawe okuzimela kweColombia, okuwumthombo wokuziqhenya okukhulu ngePopayán, idolobha elimhlophe.
Uzovakashela nini iPopayán, idolobha elimhlophe
UPopayán uyakujabulela isimo sezulu esimnandi cishe unyaka wonke, yize izikhathi eziningi isibhakabhaka sawo simbozwa ngamafu. Amahlobo afudumele, kepha amafushane, kanti ubusika buhlinzeka ngamazinga okushisa amancane nemvula ethile.
Kepha ngale kwesimo sezulu, isikhathi esihle sonyaka sokuvakashela iPopayán ngokungangabazeki yiso Semana Santa. Yilapho-ke idolobha elimhlophe likhanya ngokukhanya kwalo.
ISonto Elingcwele ePopayán libhekwa njengelidala kunawo wonke ezwenikazi laseMelika. Okwabo udwendwe lwasebusuku zifakiwe ku-2009 ohlwini lwabamele be- Amagugu Amasiko Angaphatheki Wobuntu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Popayán, kungani yaziwa ngokuthi "idolobha elimhlophe"?
Ngithanda isitayela samakholoni, ngifisa ukwazi ukuthi yini igama lendawo esithombeni?
ungimunce bese ngiyakutshela
U-Edinson wanezela kusho
Mina .. NGIYAKUMUNYA ...
Phendula u-Edinson añazco
Isidlo sakusihlwa sikaKhisimusi eCanada